Banyere ihe ngwọta nke anụ ọhịa ọhịa mara n'oge ochie. Na ọgwụ ọgwụ ha ji mee ihe ọ bụghị nanị na tomato, kamakwa mgbọrọgwụ, akwụkwọ, okooko osisi. Na nkà mmụta ọgwụ, a na-ewere osisi ndị ogwu a dị ka mkpụrụ osisi dị iche iche na-eme ka ahụ dị jụụ, antibacterial, diuretic, hemostatic na-achịkwa ọrụ nke tract gastrointestinal.
Ndị mmadụ amarala oge banyere ọgwụgwọ na ihe oriri nke black nightshade ma mụta otu esi eji osisi na mkpụrụ osisi ya na nkà mmụta ọdịnala, yana ịme nri, nchedo, jam na ihe ndị a ga-eji esi na tomato. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otú ị ga - esi mee ka jam si na mkpụrụ ndị a, nakwa maka uru ọ bara maka ahụ.